Ihostele yaseKAUNG-Igumbi lokulala elixutywe iibhedi ezi-2
Igumbi elisetyenziswa nangabanye abantu e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguKyaw Lin
· Amagumbi okuhlambela ayi-10 asetyenziswa nangabanye abantu
Ihostele yaseKAUNG ine-WiFi yasimahla kuyo yonke ipropathi kunye nembonakalo yesixeko eMandalay. Malunga neemitha ezingama-200 ukusuka kwiTempile yaseSri Ganesh, ipropathi ikwakufutshane neMyuziyam yeNkcubeko kunye neThala leencwadi. Lo mhlaba uziimitha ezingama-500 ukusuka eShwe Kyi Myint Pagoda. Iiyunithi ziza kubonelela iindwendwe nge-microwave. I-Market ye-Zegyo i-600 yeemitha ukusuka kwihostele, ngelixa i-Mahar Thatkyarthiha Pagoda i-1.1 km ukusuka kwipropati. Isikhululo seenqwelomoya saseMandalay sikumgama oziikhilomitha ezingama-33.
Onke amagumbi abandakanya igumbi lokuhlambela langaphakathi ekwabelwana ngalo elifakwe izixhobo zokuhlambela. Kukho imidlalo yebhodi, iincwadi, Xbox, Kinect, 50 intshi TV, Centre Business. Ukuhlanjwa kwempahla (Kuhlawulwa), ukurentisa ibhayisekile, iPowerbank (iMobile) iinkonzo zokurenta ziyafumaneka. Ukugcinwa kwemithwalo kukhululekile kwiiyure ze-12 kwiindwendwe.
Ihostele ye-KAUNG ikwintliziyo yesiXeko saseMandalay, yimizuzu emi-2 kuphela yokuhamba ukuya eMandalay Moat entle kunye nePalace yaseMandalay, ukuhamba ngemizuzu emi-5 ukuya kwiMarike yeZaycho, i-10 min ukuya kwisikhululo sikaloliwe saseMandalay, i-10 min ukuya kwivenkile enkulu, i-15 min ukuya kwivenkile enkulu. 24/7 imarike encinci.
Umbuki zindwendwe ngu- Kyaw Lin